Ankazobe RN 4 – Ampefy RN 1: olona efatra matin’ny lozam-pifamoivoizana | NewsMada
Ankazobe RN 4 – Ampefy RN 1: olona efatra matin’ny lozam-pifamoivoizana
Olona roa indray namoy ny ainy tamin’ny lozam-piarakodia nitranga tao Ankazobe RN 4, ny talata lasa teo. Taksiborosy iray avy any avaratra hihazo ny Renivohitra ity niharan-doza tampoka ity. Vokatry ny fandehanana mafy teo amin’ilay fiara no voalaza fa antony nahatonga ny loza, raha ny fanazavan’ny mpandeha nahita ny fitrangany. Vokany, nivadika ny fiara ary nisy tamin’ireo mpandeha ny voatsindry tao ambany fiara. Naratra avokoa ny ankamaroan’ireo mpandeha rehetra tao anaty fiara. Nipitika daholo ny entana rehetra teo ambony fitoeran’entana.
Ampasamanatongotra – RN 1
Fa nitrangana lozam-pifamoivoizana koa teny Ampasamanantongotra RN 1, lalana mihazo an’Ampefy. Fiara marika Golf iray no nivadika tany ambany tetezana rehefa tsy nahafehy lalana intsony ny mpamily. Olona roa koa namoy ny ainy tamin’ity loza ity, raha ny fampitam-baovao voaray. Nivadibadika ny fiara ka naratra avokoa ireo olona tao anaty fiara. Nifanome tanana tamin’ny famonjena ireo naratra ny olona eo an-tanàna. Potika tsy nisy noraisina ilay fiara.
Kamiaobe iray koa no tapaka hisatra teny Anosisoa Ambohimanarina, ny talata antoandro teo ihany. Tovovavy iray nitondra moto ny nofaohin’ilay fiarabe ary nifatratra tamina fiara 4×4 iray. Tsy nisy ny aina nafoy fa lasa nitsoaka kosa ny mpamilin’ilay kamiaobe. Potika ilay kamiaobe.